Hivoaka an-dranomasina izao maraina: mbola hitondra rotsak’orana betsaka i Chalane | NewsMada
Hivoaka an-dranomasina izao maraina: mbola hitondra rotsak’orana betsaka i Chalane
Par Taratra sur 28/12/2020
Niditra an-tanety tao atsimon’i Fenoarivo Atsinanana i Chalane, ny alahady maraina. Efa nanao hetsika mialoha ny komitin’ny vonjy taitra nanentana ny mponina. Mila mailo ireo amin’ny faritra manakaiky renirano fa mbola hitohy ny rotsak’orana amin’ny toerana maromaro.
Hivoaka an-dranomasina ao amin’ny morontsirak’i Belo sur Tsiribihina ilay rivodoza Chalane, anio maraina, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetr’andro, omaly. Omaly folakandro tao amin’ny distrikan’Ankazobe no nisy ny foibeny, efa nihena ny heriny ka 40 km isan’ora ny rivotra entiny miaraka amin’ny tafiotra 50 km isan’ora. Manohy ny diany miankandrefana somary atsimo andrefana i Chalane ary namakivaky ny faritra Bongolava ary hipaka hatrany Miandrivazo ka hivoaka an-dranomasina. Iangaviana ny mpiandriaka sy ny mpampiasa ranomasina ho mailo na hampiato ny asany ho an’ny morontsiraka atsinanana sy andrefana fa mbola mikorontana ny toetr’andro. Mbola mitoetra koa ny rotsak’orana entin’i Chalane ka ahina ny fiakaran’ny renirano samihafa amin’ny toerana andalovany. Nahazo fampitandremana amin’ny fiakaran’ny renirano any Toamasina I-II, Mahanoro, Moramanga, Ambatondrazaka, Amparafaravola Marolambo hatrany Miandrivazo, Belo sur Tsiribihina sy ny faritry ny Melaky iray manontolo. Manentana sahady ny mponina amin’ny faritra iva ny tompon’andraikitra hifindra toerana isorohana ny voina raha miakatra tampoka ny rano.
Teto Antananarivo, nanomboka ny alahady maraina be ny rotsak’orana sy ny rivotra somary mahery indraindray ary tsy nitsahatra mihitsy nandritra ny tontolo andro.
Momba ny toetr’andro kosa, ho maina any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy : Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Ho betsaka ny rotsak’orana any Melaky sy Menabe. Handrahona arahina orana malefaka ny faritra sisa ka tafiditra ao ny faritra Analamanga. Hitohy hatramin’ny rahampitso izany toetr’andro izany. Hiverina ho maina eto Analamanga ny alarobia.